Kids in The Kitchen | Food Magazine Myanmar | Page 8
Chedder Cheese Dark Cherry Whisk Cake
Chedder Cheese Dark Cherry Whisk Cake ခုလုပ်ပြတဲ့ကိတ်က ချိစ်အရသာကြောင့် ကလေးငယ်တို့အကြိုက်ပါပဲ။ ကိတ်သားကို ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလို ပေါင်ကိတ်၊ စပန့် (Spong)၊ ဝှစ်က်ိတ် (Whisk Cake) ကြိုက်နှစ်သက်သလို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခုကတော့ ဝှစ်ကိတ်နည်း (Whisk Cake Method) ....
21 - April - 2016
Vanilla Ice Cream (အိမ်လုပ်ဗီနီလာရေခဲမုန့်)
Vanilla Ice Cream (အိမ်လုပ်ဗီနီလာရေခဲမုန့်) ကလေးငယ်တို့နဲ့အတူ ချိူအေးမွှေး၊ လန်းပြီး အေးတဲ့ ခုလုပ်ပြမယ့် ဗီနီလာရေခဲမုန့် လုပ်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ Ice Cream Maker ထဲကထွက်တာနဲ့ Freezer ထဲမရောက်ခင် အပြိုင်မြည်းကြရင်း ပြိုက်ခနဲကုန်သွားမယ်လို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ ခုလို နွေလတစ်လနဲ့လိုက်ဖက်တာကြောင့် အားလပ်ရက်များမှာ လုပ်စားကြည့်ပါလို့ ....
Lemon Avocado Ice Cream (လီမွန် ထောပတ်သီးရေခဲမုန့်)
Lemon Avocado Ice Cream (လီမွန် ထောပတ်သီးရေခဲမုန့်) ထောပတ်သီးတွေလှိုင်လှိုင်ပေါတဲ့ ရာသီဖြစ်တာကြောင့် လီမွန်ထောပတ်သီးရေခဲမုန့် လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ထောပတ်သီး၊ သကြားတို့ရဲ့ ချိုဆိမ့်အရသာနဲ့အတူ အချဉ် အရသာ အနည်းငယ်ရှိနေတာကြောင့် ကလေးငယ်တွေ ရုတ်တရက် ချက်ချင်းအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမဲ့ အတူတူ မြည်းကြရင်းနဲ့ အရသာတွေ့မှာပါ။ လုပ်ကြည့်ရအောင် . ....
14 - March - 2016
Homemade Strawberry Banana Ice Cream (အိမ်လုပ်စတော်ဘယ်ရီ ငှက်ပျောသီးရေခဲမုန့်)
ကလေးငယ်တို့အကြိုက် အိမ်လုပ်ရေခဲမုန့်လုပ်နည်း ဆက်ကြည့်ရအောင်၊ စတော်ဘယ်ရီသီးတွေ ပေါတဲ့အချိန် ဒီတိုင်းစားလိုက်၊ ဖျော်သောက်လိုက်နဲ့ ရိုးလာရင် ကလေးငယ်တို့နဲ့အတူ အိမ်လုပ်ရေခဲမုန့် လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ Ice Cream Maker ရှိရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်သုံး Ice Cream Maker ကို မီးဖိုချောင်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရနိုင်ပါတယ်။ ....
22 - February - 2016
Banana Pound Cake ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ မီးဖိုချောင်ဝင်မယ်ဆိုတော့ ခပ်လွယ်လွယ် လုပ်နည်းလေးတွေ စဉ်းစားမိတာအမှန်ပါ။ အဓိက က သူတို့တွေနဲ့ စကားတွေပြောပြီး အဖွဲ့ကျဖို့လို့ ထင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း လွယ်ကူဖို့အပြင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့လည်း လိုပါမယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း ပေါင်ကိတ်ဆိုတာ ထောပတ်၊ သကြား၊ ဂျူံ တို့ကို ....
3 - February - 2016
ဆိတ်ပေါင်သားမဆလာဟင်း နှင့် ပဲဝါလေးထမင်း
ဆိတ်ပေါင်သားမဆလာဟင်း နှင့် ပဲဝါလေးထမင်း ☼ ပဲဝါလေးထမင်း ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ဆန် – 260 g (နို့ဆီဘူးတစ်လုံး) ♦ ပဲဝါလေး – 50 g (အနည်းဆုံး ၈ နာရီကြိုတင်ရေစိမ်ထားရန်) ♦ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ....
29 - December - 2015